နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၁၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ​နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၁၂
​နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၁၂
Posted by naywoon ni on Mar 31, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 8 comments
စာကြည့်​တိုက်​မှူး လည်း ရှိသတဲ့
စာကြည့်​တိုက်​ ဆိုတာနဲ့ ​နေ၀န်းနီ စိတ်​၀င်​စားသွားပါတယ်​ ။ တစ်​ချို့ရွာ​တွေမှာ​တော့ စာကြည့်​တိုက်​အတွက်​ ​မြေ​နေရာ​တော့ ရွာလယ်​​ခေါင်​မှာ ယူထားပါရဲ့ ။ ကွက်​လပ်​ ။ တစ်​ချို့ရွာ​တွေကျ​တော့လည်း အ​ဆောက်​အဦး လှူမဲ့သူရှိတာ​တောင်​ ​မြေ​နေရာမရှိလို့ ။ ခု​တော့ အ​ဆောက်​အဦး ပါရှိပြီး ​နေ၀န်းနီတို့ အလုပ်​ လုက်​ဖို့​တောင်​ ကျယ်​၀န်းတယ်​ဆို​တော့ ။ စိတ်​၀င်​တစား​မေးကြည့်​မိတယ်​ ။
“စာကြည့်​တိုက်​ဆို​တော့ လူရှုပ်​​နေမလား ရွာမှာ စာကြည့်​တိုက်​နဲ့ဆို​တော့ မြို့​ပေါ်ရပ်​ကွက်​​တွေထက်​ သာတာ​ပေါ့ဗျာ ကျုပ်​တို့ဆီမှာ စာပိတ်​တိုက်​တို့ စာ​လှောင်​တိုက်​တို့ပဲရှိတာ ။ စာအုပ်​​တွေ ထည့်​ပိတ်​ပြီး ​သော့ခတ်​ထားတာရယ်​ ။ ဘီရိုထဲ စာအုပ်​​တွေထည့်​​လှောင်​ပြီး ​သော့​ပျောက်​​နေတာရယ်​ ” ​ပေါ့ ။
“စာကြည့်​တိုက်​ က ခု​လော​လောဆယ်​ ည​နေ ငါးနာရီ က​နေ ရှစ်​နာရီ ​လောက်​ဖွင့်​​ပေးတာပါ ။ ရွာထဲက လူငယ်​အဖွဲ့ က ကြီးကြပ်​ပြီး စာကြည့်​တိုက်​မှူး အဖြစ်​ က​လေးမ တစ်​​ယောက်​ကို တာဝန်​​ပေးထားတယ်​ ။ သူ့အတွက်​ လစာကိုလည်း လူငယ်​အဖွဲ့ကပဲ စု​ပေါင်း​ပေးကြတယ်​​လေ ။ ဖွင့်​ကာစ လူငယ်​အဖွဲ့ ကိုပဲ လွှဲထားတာ ။ ငါတို့ လူကြီး​တွေက ​ငွေ​ကြေးစိုက်​ထုတ်​ လုပ်​​ပေးပြီးပြီ ။ စာကြည့်​တိုက်​တည်​မြဲဖို့ မင်းတို့တာဝန်​လို့ ​ပြောထားတယ်​ ။ စာကြည့်​တိုက်​ကိုလည်း အလှဲ့ကျ ထိုင်​​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ မအားလပ်​ကြတာရယ်​ တစ်​ချို့က သိပ်​စိတ်​မ၀င်​စားကြတာရယ်​​ကြောင့်​ သူ့တို့ဖာသာ သူတို့ ​ငွေစုကြပြီး တစ်​​ယောက်​ထဲကိုပဲ တာဝန်​​ပေးဖို့​ပြော​တော့ ရွာထဲက စာ​ပေးစာယူ တက်​​နေတဲ့ က​လေးကို တာဝန်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ သူ​ကျောင်းတက်​​နေတဲ့ ရက်​​တွေ​တော့ ကြီးကြပ်​တဲ့ အဖွဲ့က တာဝန်​ယူရတယ်​​လေ ။ အ​ဆောက်​အဦး ပြီးတာ နှစ်​နှစ်​ပဲ ရှိ​သေးတာ ။ ​ရောက်​​တော့​တွေ့ပါလိမ့်​မယ်​ ။ ”
​ပြော​နေတုန်းခဏ မှာပဲ က​လေးမ တစ်​​ယောက်​၀င်​လာပြီး
” စာကြည့်​တိုက်​ တံခါး ဖွင့်​ပြီး ရှင်းထားပြီးပါပြီ ။ မှတ်​ပုံတင်​ လုပ်​မဲ့ သူတချို့လည်း ​ရောက်​​နေပါပြီ ”
လို့ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးကိုလာ​ပြောလို့ သူက ​နေ၀န်းနီတို့ဘက်​လှည့်​ပြီး
” အဆင်​သင့်​ဖြစ်​ပြီတဲ့ လာသွားရ​အောင်​ တစ်​လမ်း​ကျော်​တင်​ပဲ ​ခြေလျင်​သွားလို့ရပါတယ်​ ”
​နေ၀န်းနီ တို့လည်း လိုအပ်​တဲ့ပစ္စည်း စာရွက်​စာတမ်း ထုတ်​ပိုးပြီး ​စော​စောက နွားစာစဉ်းစက်​​ဘေးက​နေ ဖြတ်​ပြီး လမ်းမဘက်​ကိုထွက်​လာက်​ပါတယ်​ ။ ရွာဆို​တော့လည်း လမ်း​တွေက စနစ်​တကျ ​ဖောက်​ထားသည်​​တော့ မဟုတ်​​ပေမဲ့ လမ်းကြို လမ်းကြား တစ်​ဖက်​ပိစ်​လမ်း နည်းပါတယ်​ ။ ပြီး​တော့ တစ်​ရွာထဲ အိမ်​​ခြေ တစ်​​ထောင်​၀န်းကျင်​ရှိပြီး အုပ်​စု တပ်​​ခေါ်တာ ဆို​တော့ လက်​​အောက်​ခံရွာမရှိပါဘူး ။ အိမ်​ကထွက်​ ​တောင်​​မြောက်​ ဖြတ်​ထားတဲ့ လမ်း​ပေါ်​ရောက်​​တော့ ​တောင်​ဘက်​​ကွေ့ ။ ​နောက်​ တစ်​လမ်းမ​ရောက်​ခင်​မှာပဲ ။ ၀င်းကျယ်​ထဲက အ​ဆောက်​အဦး အသစ်​တစ်​လုံး ။ အ​ဆောက်​အဦး ၀င်​​ပေါက်​အထက်​မှာ စာကြည့်​တိုက်​ဆိုင်းဘုတ်​ချိတ်​ဆွဲလို့ ။ ​ပေ​သုံးဆယ်​ နှစ်​ဆယ်​ ​လောက်​​တော့ ရှိမယ်​ ။ မျက်​နှာစာ မှာ ​ကော်​ရစ်​တာထုတ်​ထား​သေးတယ်​ ။ ​ကြော်​ညာ သင်​ပုန်းတစ်​ချပ်​​ထောင်​ထားတာလည်း​တွေ့ရဲ့ ။ ​နေ့အလိုက်​ အလှဲ့ကျ သန့်​ရှင်း​ရေစာရင်းကို သင်​ပုန်း​ပေါ်မှာ မညီမညာ​ရေးထားတာ​တွေ့လိုက်​ရ​သေးတယ်​ ။ ၀ရံတာက သစ်​သားနဲ့ပဲ ။ ခါး​လောက်​အမြင်​ တပ်​ထားတယ်​ ။ စာကြည့်​တိုက်​ထဲ​ရောက်​သွား​တော့ အလယ်​မှာ စားပွဲကြီးတစ်​လုံးချထားတယ်​ ။ အခန်းပြည့်​ပဲ ။ နံ​ဘေးမှာက စာအုပ်​စင်​​တွေ ။ ​ခေါင်းရင်းဘက်​မှာ​တော့ မှန်​ဘီရိုနဲ့ ထည့်​ထားတဲ့စာအုပ်​​တွေ ။ စင်​​တွေ ဘီရို​တွေ​ကြောင့်​ ရှိသမျှ ပြတင်းအကုန်​ဖွင့်​မရ ။ အနည်းငယ်​ ​မှောင်​​နေတယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ မျက်​​စေ့နဲ့​တော့မရ ။ ဆို​တော့ကာ စာအုပ်​​တွေကြည့်​ပြီး သွားရည်​ယိုချင်​​သေး​ပေမယ့်​ သက်​ဆိုင်​ရာ ကိုယ်​ပစ္စည်း​လေး​တွေဆွဲပြီး ၀ရံတာဘက်​ ပြန်​ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ မိုးကလည်း နဲနဲ အုံ့​နေတာ​ကြောင့်​ ပြီး​တော့ ၀ရံတာကကျဉ်းတာ​ကြောင့်​ ၀ရံတာရဲ့ အပြင်​ဘက်​အုတ်​ခုံ​အောက်​မှာ စားပွဲတစ်​လုံး​ရွေ့ယူလိုက်​တယ်​ ။ စားပွဲ​ပေါ်မှာ တင်​ထားတဲ့ မှန်​ချပ်​ ​ဆေးဘူး ​နေရာချလိုက်​တယ်​ ။ သူကအ​ရေးကြီးတာ​လေ ။ သတိမထားမိရင်​ စာကူးစက်​မှင်​ သုပ်​ထားတဲ့ မှန်​ချပ်​​ပေါ် တစ်​ခုခု တင်​မိရင်​ အကုန်​​ပေကုန်​​ရော။ အင်္ကျီ တို့ ​ခေါင်း​ပေါင်းလာတဲ့ တဘက်​ တို့ဘာတို့က ပြန်​​လျှော်​လို့ရ​သေး ။ လက်​ကကိုင်​လာတဲ့ မှတ်​ပုံတင်​တို့ အိမ်​​ထောင်​စု စာရင်းတို့ အခုလုပ်​မဲ့ ပုံစံ တို့သွားတင်​မိရင်​ ​လျှော်​လို့မရဘူး ။ အဲ့သဟာ​ကြောင့်​ ကိုယ့်​​ရှေ့ လာရပ်​တဲ့ သူရဲ့ လက်​​တွေကို မျက်​​စေ့ ရှင်​ရှင်​ကြည့်​​နေရတယ်​ ။ မှန်​ချပ်​နား လက်​​ရောက်​သွားတာနဲ့ “​ဟေးးး ” “ဟိုးးးးးး ” နဲ့ တားရတာ ။ အဲ့ဒိ မှန်​ချပ်​ကို စားပွဲ ဘယ်​​ထောင့်​စွန်းမှာ ထားလို့ ။ အလယ်​​လောက်​မှာထားမရ ။ ပုံစံ စာရွက်​​တွေက အကြီးကြီး​တွေ ။ ဓာတ်​​သေ မှတ်​ပုတင်​ကလည်း ထည့်​ရ​သေး ။ ​​ရှေ့မှာချထားတဲ့ သင်​ပုန်း ၀ရံတာမှာမှီ​ထောင်​ ။ ဘက်​က​ဒေါင်းပိတ်​စ ဆွဲချိတ်​ ။ ရပြီ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွာနဲ့ မတူတာက အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက မှတ်​ပုံတင်​ လုပ်​မဲ့သူ​တွေဆီက ပိုက်​ဆံ တစ်​ပြားမှမ​ကောက်​ပါတဲ့ဗျား ။ သို့အတွက်​​ကြောင့်​ မှတ်​ပုံတင်​ဘိုး ​ခြောက်​ကျပ်​ကို ၀န်​ထမ်းများမှ​ကောက်​ပြီး ဓာတ်​​သေဘိုး ငါးရာကို ​နေ၀န်းနီ ကတစ်​​ယောက်​ချင်းစီက ​ကောက်​ရအဲ့ ​တောင်းရပါ​တော့တယ်​ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွာတုန်းက ဧည့်​ခံစရိတ်​ နဲ့ ​ရောပြီး အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက ​ကောက်​တာကိုး ။ ဒီဘက်​ရွာမှာကျ​တော့ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက သူထိန်းဆို​တော့ မ​ကောက်​ပါဘူးတဲ့ ။
( ဟို …… ရုံးက ​ကောင်​​တွေ ​ဆွေးပြီပဲ မနက်​က ဟိုဘက်​ရွာမှာ ဓာတ်​​သေဘိုး လူတစ်​ရာ့ သုံးဆယ်​ ​ခြောက်​​သောင်းခွဲ နဲ့ ဘာညာသာရကာ တစ်​သိန်း​ပေးလိုက်​တာ ​နေ၀န်းနီ ဆိုတဲ့ ​ကောင်​က မြင်​ဖြစ်​​အောင်​မြင်​လိုက်​​သေး ။သူတို့ တိုးတိုး တိုးတိုး လုပ်​​နေလို့ ရှိုး​နေတာ ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကိုယ်​နဲ့ မဆိုင်​လို့ဘာမှ မ​ပြောပါဘူး ။ ခုမှ စကားအတင်းစပ်​ပြီး​ပြောတာ ။ )
ဆို​တော့ကာ လူတစ်​​ယောက်​ဓာတ်​ သေ ရိုက်​ပြီးတိုင်း ဓာတ်​​သေဖိုး ငါးရာကျပါတယ်​
ဆိုတာက အလွတ်​ကျက်​ထားသလို ​ပြော​နေရပါ​တော့တယ်​ ။ အဲ့လို ​ပြောရတာ မျက်​နှာ​တော့ပူသား ။ ဒါ​ပေမဲ့ မ​ပြောလို့ကလည်းမဖြစ်​ ။ မ​ပြော ရင်​လည်း သူတို့က ထုတ်​မ​ပေး ။ မျက်​နှာပူပူ နဲ့​တောင်းတာ​တောင်​မှ နှစ်​​ယောက်​သုံး​ယောက်​​လောက်​က ပိုက်​ဆံ ပါမလာလို့ ဆိုပြီး အိမ်​ပြန်​ယူကြ​သေး ။ ​ဟေးးး ​ဟေး ။ ​ပျော်​​တော့ ​ပျော်​စရာ​ကောင်းသား ။ စိုက်​စရာက မပါ​တော့ ဂရုတစိုက်​ ​တောင်း​နေရတာ ။ လက်​​ဗွေနှိပ်​​ပေးလိုက်​ ဓာတ်​​သေရိုက်​လိုက်​ ။ အဲ့ အရပ်​ပါတိုင်း​ပေးလိုက်​ရ​သေး ။ စာကြည့်​တိုက်​ထဲက အလင်း​ရောင်​နည်း​တော့ အရပ်​တိုင်းဖို့ရာက မလှည့်​သာဘူး ။ ခန်းလုံးပြည့်​ ခင်းထားတဲ့ စားပွဲကြီး​ဘေးမှာ ပလပ်​စတစ်​ခုံ​လေး​တွေနဲ့ထိုင်​​နေ ရတာ ။ ​ဘေးမှာလူကလည်း ၀ိုင်း​နေ​တော့​နေ၀န်းနီ နား​ရောက်​မှပဲ အရပ်​တိုင်း​ပေးရ​တော့တယ်​ ။ ရှင်းတယ်​​နော်​ ​နေ၀န်းနီ အရပ်​တိုင်းတာ ။ ​ကောင်​မ​လေး ဆို ငါး​ပေ ​ယောက်ျား​လေးဆို ငါး​ပေသုံး ။ မယုံပြန်​တိုင်း လွဲရင်​နဲနဲပဲ ။ သူတို့​တွေဘာ​ကြောင့်​ အရပ်​မထွက်​ကြသလဲ ။ ရှိ​တော့ ရှိပါတယ်​ ။ အရပ်​မြင့်​တဲ့သူ​တွေ ။ နဲတယ်​ ။ ဆယ်​​ယောက်​မှာ နှစ်​​ယောက်​သုံး​ယောက်​က အလွန်​ဆုံး ။ ​နေ၀န်းနီ ​တွေးမိတာက​တော့ အစာအ​ဟာရ ရဲ့ ​ထောက်​ပံ့မှုနဲလို့ အရပ်​က တစ်​ပုံစံထဲဖြစ်​​နေတာလားလို့ပဲ ။ သူတို့မှာ ဗိုက်​ပြည့်​ဖ်ို့ အဓိက စားတာ ။ ခန္ဓာကိုယ်​ အဟာရဖြစ်​ဖို့ ထည့်​တွက်​တဲ့သူနည်းတယ်​ ။ ပြီး​တော့ ဆယ်​​ယောက်​မှာ သုံး​လေး​ယောက်​​လောက်​က တစ်​နှစ်​လုံး​နေမှ မြို့​ပေါ်​ရောက်​ရင်​ ဆယ်​​ခေါက်​ထက်​မပိုဘူး ။ ​ရောက်​ပြီဆိုရင်​လည်း သူတို့မှာ သုံးစရာ ​ငွေ​ကြေးအလုံအ​လောက်​မပါနိုင်​ဘူး ။ လာရင်းကိစ္စပြီးရင်​ တန်းပြန်​ရရှာတာ ။ လည်​ပတ်​စရာ မရှိတဲ့ မြို့​သေး​သေး​လေးမှာ ဘယ်​​နေရာ ဘာရှိမှန်းမသိကြ။ လွယ်​အိပ်​ပုတ်​တစ်​လုံး စလွယ်​သိုင်းလွယ်​ပြီး တစ်​လမ်းဝင်​တစ်​လမ်းထွက်​ ။ ​တွေ့တဲ့သူ သွားချင်​တဲ့ ​နေရာ​မေး ။ အဲ့သလို ဆို​တော့ ……….။
.ဟုတ်တယ် အဘနီရေ့။ အရပ်အမောင်းတွေ တော်တော်ဆိုးတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ၅ပေကကို မကျော်ဘူး။
မြန်မာတွေ ကြုံလှီသေးကွေးကုန်တာကြားရ..သိရတိုင်း.. ဒီလိုမြေယာလယ်ဧကပေါများတဲ့တိုင်းပြည်မှာ.. အဓိကအရေအတွက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့.. နွားသား..။
ကလေးငယ်တွေဦးနှောက်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ..အင်မတန်အရေးပါတဲ့.. နွားသားနဲ့..နိုထွက်ပစ္စည်း..တွေကို.. မစားဝံ့.. မသုံးဝံ့အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့.. နွားမေတ္တာစာ.. စကားကြီးတခွန်းနဲ့.. အဲဒီစကားကိုဖြစ်အောင်.. ဥပဒေပြုအကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့တဲ့.. ဦးနုကိုသတိရမိတယ်…။
တပြိုင်ထဲ.. အိန္ဒိယလိုဟိန္ဒူတိုင်းပြည်ကို… ကော်ပီကက်လုပ်ရာမှာ.. အိန္ဒိယက.. ကမ္ဘာမှာနွားသား Export အလုပ်ဆုံးတိုင်းပြည်တခုမို့.. နွားသားသာမစားတာ.. နွားတွေမွေးထားပြီး.. သတ်..အသားကို..နိုင်ငံခြားပို့.. မြန်မာပြည်တပြည်စာ ဂက်စ်တွေ.. သစ်ပင်တွေခုတ်ရောင်းတာထက်.. ပိုဝင်ငွေဒေါ်လာတွေရ..။
နောက်.. သူတို့သက်သတ်လွတ်က.. နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ မျိုးစုံလုပ်စားသမို့.. ကုသလမျိုးတွေကျန်းမာသန်စွမ်းပေမယ့်..ဟိန္ဒူ ကော်ပီကက်ထေရာဝါဒထဲက သက်သတ်လွတ်က..နို့.. နို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ကြက်ဥတောင်မပါသမို့..
Top 10 Brain Foods for Children – MedicineNet
http://www.medicinenet.com › … › healthy kids az list
Nov 17, 2014 – Eating certain ‘brain foods’ may help boostachild’s brain growth and improve brain …. Low fat milk or yogurt is great sources of protein and carbohydrates foe the brain … Beef is alsoagood source of zinc, which aids memory.
Brazil exported the most beef in 2013 followed by India & Australia. Four (4) countries exported more than 1.1 million metric tons of beef in 2013: Brazil, India, Australia & the United States. Brazil and India account for nearly 40% of the world’s exports of beef.Feb 28, 2015
Selling the Sacred Cow: India’s Contentious Beef Industry …
Feb 12, 2015 – Export began in the 1960s and grew significantly in the last decade. Last year, India exported $4.3 billion worth of beef,anumber expected to …
အဲလို ပေမမှီဒေါက်မမှီတာ တခြားနေရာ ပတနာရှိဝူးဗျ။
အီးပေါက်ရင် ဖုန်ထသူ အရပ်ပိုင်ရှင်
တော်သေး ကျနော့်အရပ် ငါးပေခြောက်မို့ ဖြေသာတယ်
ကျနော်တို့ရပ်ကွက်ထဲက စာကြည့်တိုက်ကတော့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်စာကြည့်တိုက်
ဆိုင်းဘုတ်ပဲ ရှိတယ် စာတအုပ်မှမရှိ။
ပိုဆိုးတာက စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ မိသားတစု ဝင် နေထိုင် နေကြတာ
ဘဝရဲ့ အိပ်မက် မြင့်မြင့် တစ်ခုထဲမှာ စာကြည့်တိုက်သေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုလောက် ပိုင်ချင်တာ။
စာကြည့်တိုက်တွေ စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေကို လူငယ် လူလတ်တွေ စိတ် သ်ပ်မဝင်စားတော့ဘူးးးး
.ဟောအခု ရပ်ကွက်ထဲ အင်တာနက်ဆိုင်တွေလည်း ယိုင်နဲ့လဲပြိုကုန်ပြီ
တချိန်မှာ စာအုပ်တွေကို လူငယ်လူလတ်လူကြီးတွေအကုန် တစ်ပတ်လည် စိတ်ပြန်ဝင်စားလာလိမ့်မယ်လို့
စာကြည့်တိုက်ကလေးတခု ကိုယ်တိုင် ကမကထလုပ်ချင်စိတ် ရှိဆဲပါပဲဗျားးးး
စာဖတ်ဖို့ ဆိုတာလည်း စာဖတ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ လိုတယ်။
စာဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာဖို့ကလည်း စိတ်နှလုံး မညှိုးနွမ်းနေဖို့ လိုတယ်။
စိတ်နှလုံး ကြည်လင်ဖို့ကလည်း အားလပ်ချိန်လေး ရဖို့ လိုတာပဲ။
အားလပ်ချိန်လေး နည်းနည်း ရဖို့ကလည်း အချိန်တိုင်း အခြေခံစားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်မနေဖို့လိုတယ်။
ဆိုတော့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် အတွက်တောင်မှာ တအားရုန်းကန်ရှာစားရတဲ့ လူတွေကို စာထိုင်ဖတ်ဖို့ ဘယ်လို မျိုး ဆွဲဆောင်နိုင်ပါ့မလဲကွယ်။
စာဖတ်လေ့ကျင့်အစပျိုးရမဲ့ ကလေး အရွယ်တွေက အစ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ နိုင်ငံလေကွယ်။
ဒီ တောက် အစိုးရမကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူးးး
တို့တွေကို က ကံ မကောင်းခဲ့လို့ ဖြစ်မှာပါ။
ဘယ်သူ့မှ မဖတ်ရင်တောင် ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေရယ် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့ရယ် စာကြည့်တိုက်အသေးလေး လုပ်ချင်တာ စိတ်ကူးရှိတယ်။